eSancharpati | ग्रहको पूजा किन गर्ने ? यी हुन नौ ग्रहलाई शान्त गर्ने उपाय - eSancharpati ग्रहको पूजा किन गर्ने ? यी हुन नौ ग्रहलाई शान्त गर्ने उपाय - eSancharpati
ग्रहको पूजा किन गर्ने ? यी हुन नौ ग्रहलाई शान्त गर्ने उपाय
२० असार २०७८, आईतवार २१:०३
जतिसुकै नास्तिक भए पनि ज्योतिष विषयमा धेरैले आस्था राख्ने गर्छन् । ज्योतिषमा विशेषगरी नवग्रहहरुको प्रभाव वा फलादेशका बारेमा चर्चा गरिएको हुन्छ भन्ने ठानेर धेरैजसो व्यक्तिहरु ज्योतिषीकहाँ चिना हेराउन वा हात हेराउन जाने गर्छन् । हामीमध्ये कतिपयले कुनै असफलता प्राप्त ग¥यौँ भने ‘ग्रह लागेर यस्तो भयो’ भनेर ग्रहलाई दोष दिने गरेका छौँ तर हाम्रो जीवनचक्रमा सधैँ कुनै न कुनै ग्रह त लागेकै हुन्छन् भन्ने कुराको भने ख्याल गर्दैनौँ ।
हामीले मान्दै आएका सात बारकै नामबाट सात ग्रह तथा राहु र केतु गरी नौ ओटा ग्रहहरु हुन्छन्, जसलाई छोटकरीमा ‘आ., चं., भौ., रा., बृ., शं., बु., के., शु.’ भन्ने गरिन्छ । विंशोत्तरी र त्रिभागी ग्रहदर्शा हेर्दा यिनै नवग्रहहरुको फलका बारेमा चर्चा गरिन्छ । यसका अतिरिक्त मङ्गला, पिङ्गला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा र सङ्कटा गरी अन्य आठ ग्रहहरुको पनि चर्चा ज्योतिष वाङ्मयमा भएको पाइन्छ । यिनलाई स्त्रीग्रह मानिन्छ भने नवग्रहलाई पुंग्रह मान्ने गरिन्छ ।
योगिनीको सङ्कटा दशालाई विभाजन गरेर सङ्कटा र विकटा भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ । ग्रहदशाको जपपाठ गर्दा यी सबै प्रकारका ग्रहहरुको पूजा गरिन्छ भने सबैजसो पूजामा नवग्रहको मात्र पूजा गरिन्छ । यसरी हामीले ग्रहहरुको पूजा त वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौँ तर ग्रहको पूजा किन गर्ने ? भन्ने विषयमा हालसम्म हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
ज्योतिष शास्त्रका सबै १२ राशीको स्वामी हुन्छ । यो स्वामी नौ ग्रह मध्ये हुने गर्दछ । कुनै ग्रहको केवल एक राशि त कुनैको २ राशी स्वामी हुने गर्दछ । राशि स्वामी अर्थात ग्रहको शुभ र अशुभ दशा व्यक्तिको जीवन र भविष्यमा पनि पर्दछ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफ्नो राशिको स्वामी ग्रह शान्त र प्रसन्न गर्न वा कुण्डलीमा भएको ग्रह दोष निवारण गर्न केहि उपाय गर्न सकिन्छ । सूर्य र शनि समेत सबै ९ ग्रहलाई शान्त गर्न नुहाउने पानीमा केहि विशेष चिज मिलाएमा लाभ मिल्न सक्छ ।
सूर्यलाई शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
सूर्य, सिंह राशिको स्वामी हो । व्यक्ति जसको कुण्डलीमा सूर्यको प्रभाव सही छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले नुहाउने पानीमा इलायची, केसर, रातो चन्दन वा रातो रंगको कुनै पनि फूल मिलाएर नुहाउनु पर्दछ । यसले सूर्य ग्रहको अशुभ प्रभाव पनि नष्ट हुन्छ ।
चन्द्रमालाई शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
ज्योतिष शास्त्र अनुसार चन्द्रमामा कर्कट राशीको स्वामी मानिन्छ । यस्तोमा व्यक्ति जसको कुण्डलीमा चन्द्रमाको अशुभ प्रभाव छ उसले नुहाउने पानीमा सेतो चन्दन वा सेतो रंगको फूल मिलाएर नुहाएमा चन्द्रमाको खराब प्रभाव कम हुने मान्यता छ ।
मंगललाई शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
मंगल मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी हो । जसको कुण्डलीमा मंगल ग्रहको प्रभाव अशुभ छ भने नुहाउने पानीमा रातो लाल चन्दन, हींग र गुलाफको फूल मिलाएर नुहाएमा मंगलको खराब प्रभावक कम हुन्छ ।
बुध ग्रहलाई शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
बुध ग्रहलाई कन्या र मिथुन राशिको स्वामी मानिन्छ । तसर्थ जसको कुण्डलीमा बुध ग्रहको खराब प्रभाव छ भने यसलाई नष्ट गर्न नुहाउने पानीमा मह, जाइफल र चावल मिलाएर नुहाएमा ग्रह शान्त हुने र शरीर स्वस्थ रहने मान्यता छ ।
बृहस्पती ग्रह शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
बृहस्पतीलाई धनु र मीन राशिको स्वामी मानिन्छ । व्यक्तिको कुण्डलीमा यस ग्रहको अशुभ प्रभाव छ भने नुहाउने पानीमा बेसार, मह र चमेलीको फूलको पत्र हालेर नुहाएमा बृहस्पती ग्रह शान्त हुने र प्रसन्न हुने मान्यता छ ।
शुक्र ग्रहलाई शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
शुक्रलाई वृष र तुला राशीका स्वामी मानिन्छ । व्यक्तिको कुण्डलीमा शुक्र ग्रहको अशुभ प्रभाव छ वा शुक्र ग्रहको कृपा प्राप्त गर्नु छ भने नुहाउने पानीमा जाइफल, इलायची, चन्दन र दूध मिलाएर नुहाएमा यसले लाभ दिने मान्यता छ ।
शनि ग्रह शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
शनि मकर र कुम्भ राशीका स्वामी मानिन्छ । धेरै मानिसको कुण्डलीमा शनि भारी हुने र त्यसको अशुभ प्रभाव रहने गर्दछ । यसबाट बच्न नुहाउने पानीमा सौंफ, कालो तिल र खसखस मिलाकर नुहाएमा लाभ मिल्दछ ।
राहु केतु शान्त र प्रसन्न पार्ने उपाय
राहु र केतुको अशुभ प्रभावबाट बच्न र यसलाई शान्त पार्न नुहाउने पानीमा दुबो, रातो चन्दन र लोबान मिलाएर नुहाएमा यसको खराब प्रभावबाट बच्न सकिने मान्यता छ ।
#यी हुन नौ ग्रहलाई शान्त गर्ने उपाय